Uru na ọghọm nke nnwekọrịta Bochum | ECommerce ozi ọma
Uru na ọghọm nke Bochum ekesara
Oge a ka anyị chọrọ ịgwa gị gbasara uru na ndọghachi azụ nke nnabata Bochum. Iji malite, anyị ga-amalite site n’ikwu na Ekekọrịta web hosting bụ ọrụ ebe a na-akwado usoro ibe weebụ n'otu sava ahụ. A maara nke a dị ka atụmatụ ntanetị weebụ ma ọ bụ "Amalite Ijekọ Bochum Atụmatụ".
1 Kedu ihe nnabata Bochum?
2 Uru nke Bochum ekesara
3 Kọ ihe ụfọdụ nke Bochum ejiri
Kedu ihe nnabata Bochum?
Na a nnabata web hosting, a na-ekekọrịta akụrụngwa niile n'etiti saịtị niile ejiri na sava ahụ. Nke a gụnyere bandwidth, ohere diski, akaụntụ FTP, ọdụ data, na mgbakwunye na akaụntụ email.
Enweghi oke ego weebụsaịtị nwere ike ịnabata ya na otu nkesa, ya mere na ọnụego ahụ nwere ike ịbụ site na ole na ole iri ruo narị otu narị ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ puku. Akụkụ a nke akụ na ụba bụ isi ihe kpatara atụmatụ Bochum weebụ a na-abụkarị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala.
Uru nke Bochum ekesara
Ikekọrịta Bochum atụmatụ na-enye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke uru, n'etiti ndị na-esonụ na-apụta:
Ikekọrịta Bochum dị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere Bochum raara onwe ya nye na VPS Bochum.
Njikwa ihe na ndozi bụ ọrụ nke ndị na-eweta Bochum
Onweghi ihe omuma ma obu nke kachasi elu di nkpa iji jikwaa webusaiti na nnabata ndi ozo
A na-enweta ọtụtụ akaụntụ email na ngalaba nke ha
Enwere nkwado maka MySQL na PHP
Kọ ihe ụfọdụ nke Bochum ejiri
N'agbanyeghị uru nke nnabata Bochum, ọ bụkwa eziokwu na ụdị Bochum a nwere ụfọdụ ndozi. Ọmụmaatụ:
Nsogbu nchekwa na sava ahụ ka ha na-adịkarị mfe ọgụ mwakpo, ngwanrọ ọjọọ nke na-emetụta saịtị niile anakwere na sava ahụ
Mgbe ị na-ekere òkè na saịtị na saịtị ndị ọzọ, ha na-enweta usoro nwayọ nwayọ na itinye saịtị
E nwere adịghị ike n'ihe gbasara ebe nchekwa, ohere diski na CPU
Atụmatụ Bochum nwere ike ịnwe atụmatụ na ọrụ pere mpe ma e jiri ya tụnyere Bochum raara onwe ya nye
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » mba » Uru na ọghọm nke Bochum ekesara
Kedu ihe kpatara Joomla ji bụrụ nnukwu njikwa ọdịnaya CMS?
Kedu otu SEO kwesịrị isi bụrụ maka weebụsaịtị?